Nofatorana mba higadra 1 000 taona i Satana (1-3)
Ireo hiara-manjaka amin’i Kristy 1 000 taona (4-6)
Hovahana i Satana, dia avy eo haringana (7-10)
Notsaraina teo anatrehan’ny seza fiandrianana fotsy ny maty (11-15)
20 Ary nahita anjely nidina avy any an-danitra aho. Nitazona ny lakilen’ny lavaka mangitsokitsoka+ izy, sady nisy rojo vy lehibe teny an-tanany. 2 Dia nosamboriny ilay dragona,+ ilay menarana tany am-boalohany,+ dia ny Devoly+ sy Satana,+ ka nofatorany mba higadra 1 000 taona, 3 ary natsipiny mafy tao amin’ilay lavaka mangitsokitsoka.+ Nohidian’ilay anjely sy nasiany tombo-kase ilay lavaka avy eo, amin’izay dia tsy hamitaka ny firenena intsony ilay dragona mandra-pahatapitry ny 1 000 taona. Aorian’izany dia hovahana vetivety+ izy. 4 Nahita seza fiandrianana maro aho, ary nomena fahefana hitsara ireo nipetraka teo amboniny. Hitako izay novonoina* satria nitory momba an’i Jesosy sy niresaka momba an’Andriamanitra. Tsy nivavaka tamin’ilay bibidia na tamin’ny sariny izy ireo, sady tsy nandray an’ilay marika teo amin’ny handriny sy teo amin’ny tanany.+ Ary velona izy ireo ka niara-nanjaka tamin’i Kristy+ 1 000 taona. 5 —Mbola tsy velona ny sisa tamin’ny maty+ mandra-pahatapitry ny 1 000 taona.—Izany no fitsanganana voalohany.+ 6 Sambatra sy masina izay manana anjara amin’ny fitsanganana voalohany.+ Tsy hanam-pahefana+ amin’izy ireo ny fahafatesana faharoa.+ Ho mpisoron’Andriamanitra+ sy Kristy kosa izy ireo, ka hiara-manjaka aminy 1 000 taona.+ 7 Raha vao tapitra ny 1 000 taona, dia hovahana avy ao amin’ilay fonja nisy azy i Satana, 8 ka hivoaka hamitaka an’ireo firenena any amin’ny vazan-tany efatra, dia i Goga sy Magoga, mba hanangona azy ireo ho amin’ny ady. Hoatran’ny fasika any an-dranomasina ny isan’izy ireo. 9 Dia niparitaka manerana ny tany manontolo izy ireo, ka nanodidina ny tobin’ny olona masina sy ilay tanàna malala. Nisy afo nilatsaka avy any an-danitra anefa nandevona azy ireo.+ 10 Ary ny Devoly izay namitaka azy ireo dia natsipy mafy tao amin’ny farihy afo sy solifara, dia tao amin’ilay efa nisy an’ilay bibidia+ sy ilay mpaminany sandoka.+ Dia hampijalijalina* andro aman’alina mandrakizay mandrakizay ireo. 11 Nahita seza fiandrianana fotsy lehibe aho, ary hitako koa Ilay nipetraka teo amboniny.+ Nandositra niala teo anatrehany ny tany sy ny lanitra,+ ka tsy hita intsony. 12 Ary hitako ny maty, na ny lehibe na ny kely, nijoro teo anoloan’ny seza fiandrianana, dia nisy horonam-boky novelarina. Nisy horonam-boky iray koa anefa novelarina, dia ny horonam-bokin’ny fiainana.+ Dia notsaraina araka izay voasoratra tao amin’ireo horonam-boky ireo ny maty, arakaraka izay nataon’izy ireo.+ 13 Ary namoaka ny maty tao aminy ny ranomasina. Namoaka ny maty tao aminy koa ny fahafatesana sy ny Fasana.* Dia samy notsaraina arakaraka izay nataony izy ireny.+ 14 Ary natsipy mafy tany amin’ny farihy afo ny fahafatesana sy ny Fasana.*+ Ny farihy afo+ dia ny fahafatesana faharoa.+ 15 Natsipy mafy tao amin’ny farihy afo+ koa izay tsy voasoratra anarana tao amin’ny bokin’ny fiainana.+
^ Abt: “novonoina tamin’ny famaky.”
^ Na: “tsy havela hihetsika; hogadraina.”